बुबाको फोटो ट्याग होइन,बुबाको लागि त्याग गरौ - नेपाली आवाज बुबाको फोटो ट्याग होइन,बुबाको लागि त्याग गरौ - नेपाली आवाज
भदौ ०३, २०७७
अबिसेक डाँगी/काठमाडौं :- ‘जब मेरा बा धेरै जान्नुहुन्छ भन्ने बुझ्न थालेँ तब मेरा छोराछोरीले मेरा बा केही जान्दैनन् भन्ने बुझ्न थालिसकेछन्।’ जब बुबाले केही दिनुहुन्छ, तब छोरो बुबासँगै खुसीले प्रफुल्ल हुन्छ। जब छोरोले बुबालाई केही दिन्छ, तब बुबाको आँखासँगै छोरोको आँखा रसाउँछ। साच्चै बुबा आदर्शको खानी हुन्।
पितृदेवो भवः अर्थात् पिता भनेका भगवान हुन् । जसरी यो संसार देखाउनलाई आमाको भूमिका हुन्छ, त्यसैगरी पिताले पनि आफ्ना सन्तानलाई यस संसारमा ल्याउन र उनको उज्ज्वल भविष्य बनाउन सधैं प्रयास गरिरहेका हुन्छन्
बुबा केबल एउटा शब्द मात्र होइन, यो सत्य हो अनि यो एउटा शक्ति पनि हो । योसँग हरेक सन्तानको भावना र भरोसा गहिरो रुपमा जोडिएको हुन्छ । ठेस् लाग्दा पनि हामी अइया बाबा भन्छौं, यो शब्द भित्रबाट अनायस निस्किन्छ । मानौं यो एउटा पावर हो, जसबाट हामीलाई गजबको प्रेरणा प्राप्त हुन्छ अनि अगाडि बढ्ने साहस मिल्छ ।
बुबा, बाबा, ड्याडी, पिता, पापा, फादर । हामी अनेक शब्दले उनलाई सम्बोधन गछौं । हरेक सन्तानको पहिलो हिरो हो बुबा । चाहे छोरा होस् वा छोरी सबैका लागि बाबा प्यारो र पुजनीय हुन्छ । उसले आफ्ना सन्तानलाई माया र संरक्षण मात्र होइन, संघर्ष गर्न पनि सिकाउँछ । कति दुःख, पीडा लुकाएर अनि अनेक अपजस रअपमान पनि चुपचाप सहेर उसले सन्तानलाई खुसी बाँड्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ ।
संसारमा जन्म लिनु ठूलो कुरा होइन । जन्मेर बाँच्नुको अर्थ के हो ? आफ्ना सन्तानलाई हरेक बुवाले यही सिकाउने प्रयत्न गर्छन् । बाबा आमाको असल साथी मात्र होइन, सृष्टिको पहरेदार पनि हो । हिन्दु ग्रन्थ अनुसार गुरु, माता र पितालाई भगवानको मानव रुप भनिन्छ । बुवा, पिता अनेक शब्द तर एकै रुप हुन् । रक्षक, पालनकर्ता, जन्म र कर्म दिने व्यक्ति र संसार चिनाउने व्यक्तिलाई बुबाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
कहिले अभिभावक बनेर, कहिले असल शिक्षक बनेर, कहिले साथी बनेर र कहिले प्रेरणाको स्रोत बनेर हरेक पिताले आफ्ना छोराछोरीको भविष्यलाई सफल बनाउन लागिपरेका हुन्छन् । आफ्ना सन्तानलाई ताते-ताते गरेर हिँड्न सिकाउन, यो संसारका हरेक नयाँ चिजहरुसँग घुलमिल गराउन, उनीहरुलाई सही मार्गमा लैजान र सन्तानका आवश्यकतालाई आफ्नोभन्दा पहिलो प्रथमिकता दिएर पूरा गराउन सधैं आमाबुवाले प्रयास गरिरहन्छन् । सन्तान जति नै भए पनि आफ्ना बुवाआमाको लागि सबै सधैं प्रीय रहन्छन् ।
हामी हिन्दु धर्मावलम्बीले धेरै चाडपर्व मनाउँदै आइरहेका छौं । यी सबै पर्व धार्मिक, साँस्कृतिक, परिवारिक र सामाजिक परम्पराका छन् । कुनै पर्व आमाको लागि विशेष, कुनै गुरुका, कुनै दाजुभाइका, कुनै दिदीबहिनीका सम्झना गर्न विशेष छन् । त्यस्तै बुवाको सम्झना गर्नका लागि पनि भोलिको दिन महत्वपूर्ण मानिन्छ । हुन त बुवालाई माया गर्न वा बुवाको सम्झना गर्न कुनै दिन विशेष चाहिँदैन । समयले छेकेको छैन अनि भूगोलको सीमाले रोक्दैन । यो प्रेम अटुट नै रहन्छ । तर हिन्दु सनातन धर्म मान्नेले हरेक वर्षको भाद्र कृष्णपक्षको औंसी तिथिलाई पिताको मुख हेर्ने दिनको रुपमा मनाउने परम्परा छ ।
औंसी तिथिहरुलाई विशेष गरेर पितृको सम्झना गर्न पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस दिनमा पिताको भौतिक उपस्थिति हुने छोराछोरीले उनको मुख हेरेर मिठाई, फलफूल, कपडा आदि उपहार दिने र परदेशमा हुने छोराछोरीले फोनबाटै पनि कुरा गर्दछन् । त्यस्तै दिवंगत भइसकेका पिताहरुलाई छोराछोरीहरूले तस्वीर हेरेर सम्झने र पिताको नाममा घरमै वा तिर्थस्थलमा गएर तर्पण दिने चलन पनि छ । यस दिनमा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर महादेव, रसुवाको बेत्रावती, तनहुँको देवघाट, विष्णुपादुका तथा सुनसरीको बराहक्षेत्रलगाययका पवित्र तिर्थस्थल पुगेर स्थान गरी पितृहरुको नाममा श्राद्ध गरी तर्पण दिई सिदा दान गर्दा पितृको आशिर्वाद प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ ।
बढ्दो आधुनिकतासँगै शहरी जीवन अपनाउने चाहनाले सन्तानहरु बुवाआमालाई वृद्धाश्रममा राख्ने चलन बढ्दै गैरहेको छ । पितालाई भगवानभन्दा पनि अहिले बोझका रुपमा लिने कु-सन्तान पनि धेरै देखिन्छ । न त जीवित हुँदा बाबाआमाको राम्रो स्याहार गर्छन्, न त दिवंगत भएपछि उनको उद्धारमा पितृकर्म नै गर्छन् । आज आफ्नो अभिभावकलाई दुःख र पीडा दिने बाबाआमाबाट भोलि उनको सन्तानले के सिक्छन् ? यसमा पनि ध्यान दिने हो की?
के हो कुशे औंसी ?
बुवाको मुख हेर्ने दिनलाई कुशे औंसी, पित्री तीरपानी औंसी र गोकर्ण औंसी पनि भनिन्छ । बुवालाई मिठो खानेकुरा खुवाएर र उपहार दिएर यो दिन मनाइन्छ । बुवाको मुख हेर्ने दिन बुवाले गरेका त्याग, समर्पण र मायालाई विशेष रुपमा सम्झिने अवसर हो ।
जन्मदेखि सन्तानको लालनपालन तथा उज्वल भविष्यको लागि बुवाले धेरे संघर्ष गरेका हुन्छन् । आफ्नो छोराछोरीको खुसीका लागि एउटा बाबुले यति धेरै संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्, एक दिन मुख हेरेर त्यसको क्षतिपूर्ति हुनसक्दैन ।
सेल्फी अनि फादर्स डे
पछिल्ला दिनमा यसलाई संस्कृति वा परम्पराभन्दा पनि फेसनका रुपमा भड्किलो हिसाबले प्रदर्शन गर्ने चलन बढेको छ । खासगरी सामाजिक संजालमा बाबुसँगको सेल्फी तथा बाबुलाई उपहार दिएको फोटो राखेर बनावटी पिता प्रेम प्रदर्शन गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ, त्यसले कुशे औंशीको महिमा गिराएको तर्क गर्नेहरु पनि छन् ।
फेसबुकमा बुबासँगको सेल्फी राखेर ‘ह्यापी फादर्स डे’ भनेर फेसन गर्नुभन्दा यसलाई सांस्कृतिक रुपमै आआफ्नो परम्पराअनुसार मनाउनु उचित हुने संस्कृति प्रेमीहरुले बताउँदै आएका छन्।